Izincwadi Zokubhala Nokubhala, Izinkondlo
Sekucishe kube yikhulu leminyaka nengxenye kusukela lapho, eduze kwamabhishi omfula omkhulu waseRussia, amakheli aseBurlatsk awakhipha ibhagi ngensimbi. Bahlala kuphela esithombeni esihle kakhulu se-Repin nasezinkondweni zeNekrasov. Ngenxa yalezi zenzo zobuciko , isithombe sabo sishicilelwe njalo ememori yabantu.
Isikole sezincwadi: Nekrasov, "Ku-Volga"
Isitembu esithile sohlelo luvame ukufakwa emisebenzini yombhalo ehlinzekwa ukutadisha nakanjani. Umsebenzi wendlovukazi odume waseRussia uNicokolai Alekseevich Nekrasov uyaziwa kithi ohlelweni lwezikole. Sekuyisikhathi eside kubonakala njengento ejwayelekile futhi ebonakalayo. Kodwa ngezizukulwane eziningana zabantu baseRussia ekhulwini leshumi nesishiyagalolunye, izinkondlo zikaNekrasov kwakungekho neze umbukiso wamamyuziyamu. Isimbongi sabonwa ngumphakathi waseRussia njengomprofethi, umlweli wamalungelo abacindezelweyo. Eqinisweni, wayeyintando yabantu. Futhi inkondlo ethi "Ku-Volga" i-Nekrasov yakhelwe njengenye yezinhlelo zayo. Ake sizame ukuyiphinda futhi. Ama-classic ayimpawu kangangokuthi ngezinye izikhathi angafunda kabusha. Ngenxa yokuthi konke okujwayelekile kuwo, intshisekelo yokufunda ayinyamalaleki. Izithombe zakhe azipheli isikhathi.
Abacwaningi abaningi bomsebenzi wezinkondlo bavame ukubiza lo msebenzi ngokuthi inkondlo. Futhi zikhona izizathu ezicacile zalokhu, uma umuntu eqondiswa endaweni yokuqala ngokulingana kwayo ngokomthetho. Kodwa futhi nokuqukethwe kwe-semantic kule nkondlo ethi "Ku-Volga" i-Nekrasov igxilile kuma-generalizations amakhulu kakhulu. Izithombe ezenziwe nguye zenza umfundi acabange ngokuhlupheka kwabantu endleleni eya esikhathini esizayo. "Ngentengo yentuthuko," njengoba yaziwa ngekhulu lama-20. Kodwa ngisho noma ungahlolisisi emibhalweni engafanele yefilosofi, okwamanje lo msebenzi awunzima ukuwuqonda njengoba kungase kubonakale njengokungaboni kahle. Ngaphandle komongo womsebenzi nomsebenzi wembongi, akunakwenzeka ukuyiqonda kahle futhi lo msebenzi wakhe. Ivesi "Ku-Volga" I-Nekrasov eyakhiwe ngaphansi komqondo wohambo kulo mfula. Ngokuvamile njengomculi ovezwe ekuphileni. Futhi noma yimuphi umculi ovamile ubophekile ukwenza ngale ndlela - kusukela ekubonweni okubonwe empilweni, kuya ekuchazeni okujulile nokukhiqiza lokho akubonayo. Akukho lutho olumangalisa ukuthi ohlelweni lwakhe "Ku-Volga" umbongi uphendukela esithombeni esasengqondweni engqondweni yakhe ebuntwaneni bakhe. Umfula ngokwayo, uthanda umuntu waseRussia amandla namandla. Kodwa kungaphansi kokucindezelwa nokungathembeki kokukhona.
U-Nikolai Alekseevich Nekrasov uvela kwesinye esicebile, kodwa ngesikhathi sokuzalwa kwakhe ungumndeni ohluphekile, ohloniphekile. Ubuntwana bakhe budlula emndenini ohlala e-Yaroslavl esifundazweni. Indima yokunquma ekubunjweni kwanoma yimuphi umuntu, ikakhulukazi ikusasa lembongi, idlalwe yindawo lapho kubonakala khona ubuntu bakhe. Futhi ubuntwana benkondlo babedluliselwa endaweni engafaneleki. Umndeni omkhulu, ozinelisayo, ubaba ohamba phambili futhi okhohlisayo, ehamba naye ezindaweni ezihlala esifundeni seVolga kanye nohlobo lwezinhlupheko ezingapheli zendabuko endleleni - lezi zimbono eziqhakazile zobuntwana. Babephikisana kakhulu. Kodwa ubuntwana benkondlo babedlula ngqo kwiVolga. Futhi lokhu kunqume kakhulu umsebenzi wakhe olandelayo.
Engaziqedi izifundo zakhe e-gymnasium, uNikola Nekrasov wayejabule ngokubalekela ePetersburg ngenxa yokukhathazeka kukayise. Lapho ezwa ukuthi wenqaba ukwenqaba ukuya empini, lo wesifazane waqeda ubuhlobo naye futhi wenqabela ngisho nokusekelwa kwezimali okuncane. Khona-ke kwakudingeka enze indlela yakhe ekuphileni eyedwa. Iminyaka emide yokulwela ukutholakala ekugcineni yamenza njengomuntu. Kodwa ubuntwana benkondlo babedlula iVolga. UNekhrasov wabuyela lapho ngokuphindaphindiwe. Akukona nje izinkondlo nemifanekiso yezinkondlo. Isimbongi sasihamba kakhulu ezweni lonke futhi sicabange ngokuphelele ukuthi yiziphi izimo zokuphila kwamaRashiya eziphila. Umqondo wokuthi kungenzeka yini ngandlela-thile ukuthi ushintshe isiphetho sakhe, iminyaka eminingi inqume indlela yokuphila yokukhetha.
U-Nikolay Nekrasov uyele indlela ende eya empumelelweni. Futhi ngazama konke ngomsebenzi wami. Ukwakhiwa kwemibhalo kancane kancane kwaba yinto esemqoka yokuphila kwakhe. Izingqikithi zayo eziyinhloko ezinkondlweni kwakuyikusasa le- serf poasantry, indlela yokuphila kanye nezinhlanzi zabantu abampofu esifundazweni saseRussia. Lezi zihloko zazijwayele futhi ziseduze nomlobi kusukela ebuntwaneni, okuyinto uNekrasov esebenzisa kuVolga. Inkondlo, ebhekisela ku-artel burlatsk, ngesikhathi esifanayo ukubuyela ekubonweni okuhlangenwe nakho kwasebuntwaneni, nokuqonda kokubonwayo ngokombono wokuvuthwa kokudala. Umsebenzi wezincwadi uNekhrasov wayehlotshaniswa eduze nezincwadi ezinjengomagazini othi "Otechestvennye zapiski", futhi kamuva noPushkin "Contemporary". Ihlanganyela kakhulu futhi iyakhicilela. Kumele kuqashelwe ukuthi, ngaphezu kwetalente elingenasisekelo, uNikola Nekrasov naye wayeneli talenta le-entrepreneur. Ukusuka ebumpofu wakwazi ukuphuma masinyane.
Ngokuzibandakanya kukaNekrasov empilweni yomphakathi kanye nomsebenzi wokukhanyisa, ibhizinisi lakhe eliyinhloko kwakuyizinkondlo. I-Poet Nikolai Nekrasov yaziwa kabanzi eRussia. Izwi lakhe lizwakala elivuthayo nelithukuthele. Izinkondlo zikaNekrasov zazifundwa emaceleni ahlukahlukene kakhulu emphakathini waseRussia: kusukela enkantolo ephakeme kunazo zonke kulabo ababengafundile ukufunda. Imigqa yenkondlo yayicatshangwa kabanzi futhi yahlukaniswa ngendlela yama-aphorisms. U-Nekrasov wayelokhu ezwa ukuthi ukusabela komphakathi waseRussia emsebenzini wakhe, ngakho-ke umphakathi wokufunda wazama ukudumazeka.
I-Nikolai Nekrasov, "E-Volga" - inkondlo mayelana nokuphela kwabantu
Lo msebenzi ovusa amadlingozi abacwaningi abaningi bomsebenzi wezinkondlo uthathwa njengenye yezinto ezibaluleke kakhulu. Kodwa ngesikhathi esifanayo sekude kakhulu nokumemezela okuqondile kwezenhlalo nezombangazwe. Uhlelo oluyinkimbinkimbi yenkondlo ethi "Ku-Volga" I-Nekrasov yakha kanzima kakhulu, kodwa ayinakho ukuphikisana. Umbono wendaba uhlose ukuveza isihloko. Indaba inzima ngamabomu futhi iqhutshwa egameni leqhawe elithile elisebusheni obukhulu laseRussia ebusheni bakhe futhi liyajabula ukubuyela olwandle. Inqubo enjalo yokwakha ivumela umlobi ukuba azihlukanise nokumemezela okuqondile komlingiswa wakhe. Kodwa yimuphi umqondo walo msebenzi? Ingabe kuphela lokho uNekrasov akubona ku-Volga? Ukuhlaziywa komsebenzi omkhulu wokudala wezinkondlo kusivumela ukuthi siphethe ngokuthi wayengabonakali ngokusha kule mbongo. Isihloko sokuhlupheka kwabantu ngaphansi kwejoka lezinkinga zokuphila kanzima kwakuyinhloko emsebenzini wakhe. Kodwa kuphela inkondlo ethi "Ku-Volga" i-Nekrasov yakwazi ukuphakama kuma-philosophical generalization. Umbongi uveza lapha ekupheleni kwezwe lakhe. Ingabe abantu abacindezelweyo bayobhekana nokuhlupheka ngekusasa elingcono? Noma ingabe ithemba lithemba nje?
Ukuphakama kokunyakaza komphakathi
Imibono nezithombe zezinkondlo zikaNekrasov azizwanga futhi ziqondwa umphakathi waseRussia. Intshumayelo yakhe evuthayo yavusa umqondo womphakathi futhi yamphoqa ukuba afune izindlela zokuhlela kabusha i-oda elikhona. Bonke abaguquleli bekusasa bakhuliswa kule nkondlo. Abaningi babo babengazibona njengesiqondiso esenzweni, ngoba kwakungokuqala kokuphila uhlobo lwesifundo sesikole. I-Nekrasov ku-Volga ayizange ikwazi ukuqonda ukuthi intuitively izwa kanjani amandla kakhulu abantu, okuyinto ngelinye ilanga ayeka ukuzithoba ngokuzithoba ngendwangu ehlongozwayo ngokuzayo. Futhi emva kokuyidonsa, uzokhetha iklabhu efanelekayo ogwini bese uya kushayisana kokubili ibhaji kanye nezimpahla, nabanikazi bayo. Ngolunye usuku lokhu kwenzeke, zonke izizukulwane zabavukeli baseRussia bezikulungele ukuya enkundleni yezigwegwe kanye ne-scaffold. Ngokuba izifiso egameni labantu abaphefumulelwe izinkondlo zikaNikolai Alekseevich Nekrasov. Ngisho nalabo abaye baqala ukubusa isigamu sekhulu leminyaka emva kokufa kwesibongozi bazibheka njengabindlalifa bakhe abangokomoya. Futhi ebusheni babo bafunda inkondlo ethi "Ku-Volga" futhi bakwazi ukufaka kahle ukushayela kwamandla ayo.
Isikole semibhalo uNekrasov
Kodwa imbongi yashiya uphawu lwakhe hhayi empilweni yomphakathi kuphela. Ezincwadini zesiRashiya zengxenye yesibili yekhulu leshumi nesishiyagalolunye, ukukhona kwesimo esinjalo njengesikole "Nekrasov" kubonakala. Babeyizimbongi nabalobi abaqhubeka futhi bahlakulela izingqikithi nemifanekiso yokuqala ebonwe emsebenzini kaNikolai Nekrasov. Izinkondlo zesikole sikaNekrasov kuqala zigcizelela izinkinga zabo zenhlalo. Lezi zinkinga ezingenakuqhathaniswa nezindlela zefilosofi zaziziphethe ngendlela encane kakhulu. Babevame ukunganaki ubuciko ngenxa yobuzwe. Lo mkhuba wezincwadi wawukhona ekuphikisweni okuqhubekayo nekhampasi elingafani nelinye lezinkampani zokuzijabulisa, lashunyayelwa "ubuciko ngenxa yobuciko" futhi wenqaba noma yikuphi ukubaluleka komphakathi kokuphefumulelwa kwezinkondlo. Izincwadi zaseRussia zathuthukiswa ngaleyo mpikiswano. Imidwebo yesikole se-poetic sikaNekrasov ingatholakala ngisho nasemisebenzini yezinkondlo ezinjalo ezikude-njenge-Alexander Blok no-Andrei Bely.
Kuyini iStream Guard, ukuyivumela futhi uyilungiselele
Omiyane peeper: incazelo kanye nezithombe